China Cold Yakagadzira U Steel Sheet Pile YeProjekiti fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Cold form U type steel sheet piles' process ndeiyi: simbi billet inodziiswa uye inokungurutswa nenzira yakafanana neyekupisa-yakakungurutswa murwi wepepa, asi pachinzvimbo chekuumbwa muzvikamu zveU sheet mirwi ichipisa, makoiri anosiiwa kuti atonhore.Makoiri anopisa anotenderedzwa anofambiswa nemuchigayo uye akaumbwa patembiricha yemumba achipinda muchimiro cheU yekupedzisira.
1)Nzvimbo Yekwakabva: Tianjin, China (Mainland)
2)Zita reChiremera: ZHANZHI
3) Chiyero: EN10249
4) Rudzi: unonyora pepa murwi
5) Technique: kutonhora kuumbwa
6)Kureba: Chero Hurefu
Kumwe kutonhora kwakagadzira U simbi sheet pile size
1) Iyo hupamhi hwechikamu yakakura, iyo inovimbisa kuti mechanical properties yechikamu inoitwa zvizere.
2) Chimiro chakaenzana uye chiri nyore kushandisa zvakare.
3) Dhizaini yechigadzirwa muchinjika-chikamu chimiro inonzwisisika uye ine yakakwirira "mhando chinhu"
4) Kushandiswa kwesimbi mapepa mirwi hakugoni kudziviswa nemamiriro ekunze.
5) Kuvaka kune pachena kudzivirira kwezvakatipoteredza, izvo zvinoderedza zvakanyanya kuwanda kwevhu rakatorwa uye huwandu hwekongiri inoshandiswa, uye inodzivirira zvinobudirira zviwanikwa zvevhu.
6) Green uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
7) Zvimwe zvinowanikwa nyore nyore: Cold-Formed sheet piles inogadzirwa nepamusoro-soro pane inopisa-yakaputirwa mapepa emapuranga, kuwedzera nhamba yemazuva ekutenderera kusarudza kubva.Nguva yekugadzira yakajairika masvondo maviri.
8) Mutengo-unoshanda: Cold-Yakaumbwa pepa murwi ingangoita 30-40% inodhura kuburitsa pane inopisa-yakakungurutswa pepa murwi.
9) Kutakura kunodhura kutakura: Nekuda kwenhamba huru yevagadziri vemirwi yemapepa anotonhora, pane mukana wakakura wekuti unogona kuwana chigayo chiri pedyo kupfuura kana waizotenga mirwi yemapepa akakungurutswa.Pamusoro pezvo, iyo yakakura kusarudzwa kweinotonhora-yakaumbwa mapepa mirwi inogona kukubvumidza iwe kuti uwane zvikamu zvine chikamu modulus padyo neako madhizaini pasina kuwedzera kukuru kwehuremu.
10) Kuwedzera kushanduka pakugadzirisa: Cold-formed sheet pile interlocks inobvumira kutenderera kwe 25-degree, pane kutenderera kwe7-to-10-degree inobvumirwa nehot-rolled sheet pile uchishandisa bhora-ne-socket interlocks.
Cold yakaumbwa U simbi simbi murwi inoshandiswa zvakanyanya mumafashama purojekiti, chirongwa chekuvaka, kuvaka wharf uye zvichingodaro.